फोटोग्राफी, भिडियो रेकर्डि | | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी
डिजिटल क्यामेराको म्याट्रिक्सको प्यारामिटरहरू के राम्रो तस्वीरहरूको लागि A3 ढाँचा हुनुपर्छ?
डिजिटल क्यामेराको म्याट्रिक्सको कुन प्यारामिटर राम्रो A3 ढाँचा चित्रहरूको लागि हुनुपर्छ ??? यस केसको सिद्धान्त हो: कुन दूरीबाट यो A3 हेर्नेछ? यदि -०-40० सेन्टिमिटर देखि, त्यसपछि रकम ...
प्रविधि, विषयहरू, शूटिंगको शैलीहरू
मलाई बताउनुहोस्,3TV को HDMI इनपुट 1-ARC / 2-Unignedigned / 3-MHL, तपाइँ कुनै डिजिटल सेट-शीर्ष बक्समा कुनै पनि टिभीमा जडान गर्न सक्नुहुन्छ ???
मलाई भन्नुहोस्, टिभीमा HD एचडीएमआई इनपुटहरू १-एआरसी / २-हस्ताक्षरित /--MHL छन् तपाईं डिजिटल टिभी सेट-टप बक्स कसैलाई पनि जडान गर्न सक्नुहुन्छ ??? कसैलाई। त्यसपछि रिमोट कन्ट्रोलमा इच्छित आगत चयन गर्नुहोस् निर्देशनहरूमा, नियमको रूपमा, त्यहाँ स्पष्टीकरणहरू छन् ...
के म कम्प्यूटरको लागि मनिटरको रूपमा टिभी प्रयोग गर्न सक्छु? के यो सम्भव छ र यसको लागि के आवश्यक छ?
के टिभी कम्प्युटरको लागि मोनिटरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? के यो सम्भव छ र यसको लागि के आवश्यक छ? पीसी मोनिटरको सट्टा टिभी सेटको सम्भावनाको बारेमा प्रश्नको सबै जवाफको सकारात्मक निर्णय हुन्छ।
स्कूलमा साक्षात्कारको प्रश्नहरू?
स्कूल साक्षात्कार प्रश्नहरू? यहाँ हाईस्कूलका विद्यार्थीहरूका लागि केहि प्रश्नहरू छन्: अन्तर्वार्ता प्रश्न: lates० टेम्प्लेटहरू हामीलाई आफ्नै बारेमा बताउनुहोस्। तपाईं आफैंलाई कसरी संक्षिप्तमा वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईंलाई कुन कारणले __________ गर्नुभयो?
कौन र कहाँ उत्पादन लक्जरी इलेक्ट्रनिक स्टोज?
दे लक्स इलेक्ट्रिक स्टोभहरू को र कहाँ उत्पादन हुन्छन्? ओभनमा तापक्रमको साथ धेरै नमिल्दा तापमानसँग मेल खाँदैन - थर्मामीटरमा खराब स्नातक गरे। र कम्फर्ट्सले उनीहरूले जलाउँदा ठूलो आवाज निकाल्छन्। बारहरू कुनै स्तर ले घृणित हो, ...
मास्कोमा जहाँ तपाईं पुरानो टिभी एक नयाँको लागि बदल्न सक्नुहुन्छ?
मस्कोमा तपाईं नयाँको लागि पुरानो टिभी कहाँ साटासाट गर्न सक्नुहुन्छ? र तपाईंलाई सायद थाहा छैन कि यो पब्लिसिटी स्टन्ट हो। त्यस्ता फर्महरूमा तपाईंको टिभी सेट १००० रूबलको लागि लैजान सकिन्छ (...
तोशिबा टिभीका लागि "" युनिभर्सल "हामा रिमोट कसरी सेट अप गर्ने?
तोशिबा टिभीका लागि "" युनिभर्सल "हामा रिमोट कसरी सेट अप गर्ने? यस्तो रिमोट कन्ट्रोल खरीद गर्नु अघि, यो स्पष्ट पार्नु आवश्यक थियो (निर्देशनहरू समावेश (कुनै पनि केसमा हुनुपर्दछ) समर्थित उपकरणहरूको एनोटेसन), त्यहाँ छ ...
म डिजिटल टाइमर क्यालेन्डर bnd-50 / sg50 सेट अप गर्ने निर्देशनहरूको खोजी गर्दैछु। कृपया सहायता !!!
म कसरी एक camelion bnd-50 / sg50 डिजिटल टाइमर सेट अप गर्न को लागी निर्देशन खोज्दै छु। कृपया मलाई सहयोग गर्नुहोस!!! http://mcgrp। डिजिटल टाइमर २ 50० भोल्ट सकेटमा प्लग गर्नुहोस्। २. उत्तम प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न, डिजिटल टाइमर छोड्नुहोस् ...
सीढी कसरी छनौट गर्ने? एक सीढी किन जब म हेर्छु?
भर्या? कसरी छनौट गर्ने? भर्या? खरीद गर्दा तपाईले के हेर्नु पर्छ? भर्या। + भिडियो कसरी चयन गर्ने http://mastremont.ru/publ/spravochnik/vybor_instrumentov/kak_vybrat_stremjanku_video/78-1-0-444 भर्या। खरीद गर्दा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण प्यारामिटर यसको कार्य उचाइ हो। यो एकदम सरल गणना गरिन्छ: उचाईमा ...
मलाई बताउनुहोस् कुन ध्वनिक उत्तम घरको लागि उपयुक्त छ?
मलाई भन्नुहोस् कुन ध्वनिकी घरको लागि उत्तम हो? म हेडफोनको लागि पनि हो। ... उनीहरूको Panasonic SC-VKX80EE-K "sabs" मा "रूसी र्याप" र मूर्ख अश्लील कन्द सुन्ने गाईवानी-छिमेकीहरूसँग लड्न थाकेका छन् ...
कुन हल गर्ने छनौट गर्ने टिभी? कुन राम्रो छ?
कुन रिजोलुसन TV छनौट गर्ने? के राम्रो छ? टिभी रिजोलुसन स्वादको कुरा हो। शपिंगमा जानुहोस् र काम गर्ने टिभी सेटहरू हेर्नुहोस्, जुन छवि तपाईंलाई मनपर्दछ तब खरीद गर्नुहोस्। टिभीसँग त्यस्तो कुनै अवधारणा छैन ...
pliz मलाई र 100 हर्ट एलसीडी टीवी मा 200 हर्ट देखि धेरै अलग छ? *
मलाई pliz बताउनुहोस् र १०० हर्ट्ज एक LCD टिभीमा २०० हर्ट्ज भन्दा धेरै फरक छ? * यो बुलशिट हो। मोनिटर her० हर्ट्ज हो। झिम्क्याउने? होइन, धेरै छैन। कुनै पनि स्टोर बिक्रीमा जान प्रयास गर्नुहोस् ...
एलसीडी टिभी एक लामो समयको लागि खुला छ। किन
LCD TV लामो समयको लागि सक्रिय हुन्छ। किन? मृत अन्त। यो सामान्य हो, सबैलाई होइन, अन्तमा ... (स्मार्ट प्रश्नहरू सोध्नुहोस्) किनकि यो सँधै गल्ती नै हुँदैन। यद्यपि त्यस्ता मोडेलहरू छन्। "राम्रो, ... को सिद्धान्त मा छनौट
TTL फ्लैश मोड, यो के हो?
TTL फ्ल्यास मोड, यो के हो ?? प्राविधिक तवरले उच्च-गुणवत्ताका तस्विरहरू प्राप्त गर्ने आधार एक्सपोजरको सही निर्धारण हो। आधुनिक क्यामेराले फोटोग्राफरबाट ठूलो मात्रामा यो चिन्ता हटाएको छ, प्राय सबैले यसलाई सही रूपमा गर्न सक्दछन् ...
Qumo कसको फर्म? पूर्वी युरोपको द्रुत बृद्धि भएको बजारमा उनीहरूको उत्पादनहरू प्रवर्धन गर्न फ्युम मेमोरी र एमपी players प्लेयरहरूको पाँचवटा सबैभन्दा ठूलो दक्षिण कोरियाली उत्पादकहरूको संयुक्त परियोजनाको रूपमा क्युमो २००२ मा स्थापित भएको थियो।
कुन कम्पनी कुन देशको "मूल" हो?
कुन कम्पनी कुन देशको "मूल" हो? बेको - टर्कीडेउ - कोरियागोरेन्जे -? हिताची - जापानएलजी - कोरियापानेसोनिक - जापानसमसुung - कोरियासकारलेट - इ England्ल्यान्ड (चीन?) थॉमस - जर्मनीजानुसी - ...
DVB-T2 समर्थनसँग कुन रिसीभर छनौट गर्न राम्रो छ?
कुन DVB-T2 रिसीभर छनौट गर्न? D-COLOR DC1501HDSven EASY SEE-121SUPRA SDT-M M MDI DBR-94Tesler DSR-501TELEFUNKEN TF-DVBT10Sven EASY SEE-205 DDOriel 122 (DVB-T963) Mezzo M2T7802Mrypt MX.com 2p ? hid = 71amp; CAT_ID = 2amp; CMD = -CMP = 91105 चयनित मोडेलमा क्लिक गरेर तपाईं सबै देख्न सक्नुहुनेछ ...
के यो बन्द हुन्छ जब फलामको तलबाट पानी बहन्छ भने बन्द हुन्छ?
के एकलबाट बन्द पानी खोल्ने क्रममा यो सामान्य छ? तपाईंले किनेको स्टोरमा विक्रेतालाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रश्नको उत्तर दिन पर्याप्त जानकारी छैन। कम्तिमा यो राम्रो हुनेछ ...
मानिसहरू एक स्मार्टफोन छान्नुहोस्। राम्रो सोनिया के कुरा हो, सैमसंग, एसस वा अरु केहि?
व्यक्ति, मलाई एक स्मार्टफोन छान्न मद्दत गर्नुहोस्। सोनी, सामसु,, Asus वा अरू के भन्दा राम्रो छ? ठीक छ, दुई हप्ता एकचोटि, त्यसो भए तपाईको हातमा के फिट लिन्छ। तिनीहरूलाई वास्तविक जीवनमा महसुस गर्नुहोस्। डोर्महाउस मैले देखिन ...
पहिलो क्यामेरा कहिले देखा पर्यो? कसले यो आविष्कार गर्यो?
पहिलो क्यामेरा कहिले देखा पर्‍यो? कसले आविष्कार गरे? र मलाई लाग्छ कि डेनिस गलत छ। अमेरिकामा १ th औं शताब्दीमा तिनीहरू फोटोग्राफीका साथ परिचित थिए। फोटोग्राफीका संस्थापकहरू, आविष्कारकहरू L Zh। M. ...
59 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,477 प्रश्नहरू।